Zere Inye Ndi Njikwa site na genlọ Ọrụ | Martech Zone
Inwe m gị n'ụlọnga kemgbe ihe anya-opener otú azụmahịa na-eme… na ọ bụghị mma. Achọghị m ka post a bụrụ ụlọ ọrụ na-ebugharị ebe m nwere ọmịiko na ọtụtụ ụlọ ọrụ na mkpebi siri ike ha ga-eme. Mgbe mbụ m malitere, m bụ ezigbo echiche na achọghị m ịbụ na ụlọ ọrụ - otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eme ka ndị ahịa nwee nsogbu ma belata, na-akwalite ha kwa ụbọchị, na-atụgharị ma na-agbanwe, ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ karịa na onye na-ejide ha mgbe ha gbagoro.
Anyị enweela nkwekọrịta siri ike nke mere ka ndị ahịa nwee ike ịhapụ mgbe ha chọrọ, mana ọ dakwasịkwara anyị - ọtụtụ oge. Kama iji ya dị ka ihe ọpụpụ mgbe ihe anaghị arụ ọrụ, anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa debanyere aha n'okpuru sistemụ ọnụego anyị, na-agbasi mbọ ike iji nweta ọtụtụ ọrụ karịa ka anyị kwere nkwa, wee kwụsị iji zere ịkwụ ụgwọ ya n'okporo ụzọ. Nke ahụ tara anyị nnukwu oge na ego.
Nke ahụ kwuru, anyị ka kpọrọ asị ịnweta ozi ịntanetị dị ka nke a:
Nke a na - akpata nnukwu nsogbu abụọ. Nke mbu, onye ahia ugbu a enweghi ego ma dabere na ulo oru ha jiri emefu ego ha. Nke abuo, onye ahia ya ugbu a na-ewe iwe na ụlọ ọrụ ahụ, yana ohere nke ihe ịtụgharị adịghị mma. Nke ahụ pụtara na ọ nwere ike ịdị ha mkpa ịhapụ pụọ ma bido ịmalite. Usoro dị oke ọnụ nke ha agaghị enwe ike imeli.
Dabere na nkwekọrịta ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ike ịbụ aka nri. Ikekwe ụlọ ọrụ ahụ tinyere ọtụtụ mgbalị n'ime ọnụnọ weebụ ma na-arụ ọrụ na nkwekọrịta ebe onye ahịa ahụ na-akwụ ụgwọ na atụmatụ ntinye. Ebe nrụọrụ ahụ nwere ike iwe obere oge iji kwado nke ọma (ọ bụ ezie na ọ tụrụ m n'anya na onye ndụmọdụ SEO ga-ewere ndị na-asọmpi ahịa). Ọ nwere ike ọ gaghị abụ ọnọdụ njigide ma ọlị.
Ọ bụrụ n’ịche na ụlọ ọrụ ahụ hiere ụzọ n’agbanyeghị ihe ọ bụla, ị nwere ike chọọ nyocha gị. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na anyị outsource animation ka gị n'ụlọnga, anyị na-eleghị anya naanị na-aga iji nweta mmepụta video azụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enye faịlụ After Effect faịlụ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ akụkụ nke nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịdezigharị ihe eserese ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-agaghachi n’ụlọ ọrụ ebe a si nweta nkwekọrịta ọzọ.
Otu esi egbochi ọnọdụ ndị eji eji eji
Na ahia dijitalụ, anyị ga-akwado gị ka ị banye na mmekọrịta gị na ụlọ ọrụ gị mara ihe ndị a:
ngalaba aha - onye nwe ngalaba aha? Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ debanyere aha ngalaba maka onye ahịa ahụ, wee debe ya. Anyị na-eme ka ndị ahịa anyị deba aha ma nwee ngalaba ahụ.
mba - Ọ bụrụ na ị gbubiri nkekọ gị na ụlọ ọrụ gị, ịkwesịrị ịkwaga saịtị gị gaa na onye ọbịa ọzọ ma ọ bụ ị nwere ike ịnọnyere ha? Anyị na-azụkarị Bochum maka ndị ahịa anyị, mana ọ na-abụkarị aha ha ka ọ bụrụ na ha ahapụ anyị, ha nwere ike wepu anyị ohere.
Akụ Akụrụngwa - hazie faịlụ dị ka Photoshop, onye na-ese ihe, mgbe mmetụta, Koodu na ihe ndị ọzọ ejiri mepụta nsonaazụ mgbasa ozi ndị ọzọ na-abụkarị ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ belụsọ ma ị na-akparịta ụka na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị mepụtara infographics, dịka ọmụmaatụ, anyị na-eweghachite faịlụ Illustrator ka ndị ahịa anyị nwee ike weghachite ha ma bulie uru ha bara. Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị anaghị eme ya.
Verszụta na mgbazinye
Ihe niile na - agbadata ma ị na - azụ ma nwekwa ikike n’ihe niile gị na ụlọ ọrụ gị na - eme, maọbụ ọ bụrụ na ha jigide ụfọdụ ikike n’ọrụ ha na - arụ. Anyị mgbe niile mee ka nke a doo anya na ndị ahịa anyị. Anyị azụlitela ndị ahịa ole na ole ebe anyị na-akwụ ụgwọ dị ala site na ịmekọrịta nkwekọrịta ebe anyị jikọtara akụ ahụ. Nke ahụ pụtara na anyị nwere ike iji ha maka ndị ahịa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Otu ihe atụ bụ echekwa ebe ikpo okwu anyị wuru ọtụtụ afọ gara aga site na iji Google Maps.
Ikwu okwu iwu nwere ike isi ike ịgụ n'ime nkwekọrịta ọkọlọtọ ọkachamara wee hụ na ị maara. Simplezọ dị mfe bụ ịjụ:
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị akwụsị mmekọrịta azụmahịa? Enwere m ya ka ị nwere ya?
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ndozi mgbe anyị kwụsịrị mmekọrịta azụmahịa anyị, olee otú nke ahụ ga-esi mee?
Anaghị m agbanye isiokwu a ị kwesịrị mgbe niile kpakorita ndi nwe gi. Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike ịnweta ọnụahịa asọmpi sitere na ụlọ ọrụ n'ihi na ha emeworị ntọala ma nwee akụ na ngwaọrụ iji rụzuo ọrụ. Nke a bụ ihe a ala or nkeji nkwekọrịta ma nwee ike ịrụ ọrụ maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ saịtị zuru ezu na mgbasa ozi niile maka $ 60k mana kparịta $ 5k kwa ọnwa. Onye ahịa ahụ na-erite uru site na ịmalite saịtị ngwa ngwa na-enweghị akwụ ụgwọ ego niile n'ihu. Mana ụlọ ọrụ ahụ na-erite uru n'ihi na ka afọ na-aga, ha enwetala ụzọ nkwụnye ego na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ kpebie igbubi nkwekọrịta ahụ na nke ndabara, ha nwekwara ike tufuo akụ ya na ya. Ma obu ikekwe ha nwere ike ikwurita onu ego iji zuta ihe ndi ahu.
Anyị na ndị ọka iwu anyị na-arụ ọrụ ugbu a ịkọwapụta onyinye a maka ndị ahịa. Anyị nwere ike ịnye nkwekọrịta atọ dị iche iche, gụnyere ịjụ ezigbo ndụmọdụ na-enweghị akụ, mmebi ebe anyị jigidere ikike nke ọrụ na ọnụọgụ dị ala, yana ogbugbu ebe ndị ahịa anyị jigidere ikike nke ọrụ ahụ na ogo dị elu.
Wayzọ a, ụlọ ọrụ ndị kwere na anyị nwere ike ịbụ oke ọnụ ahịa nwere ike na-arụ ọrụ anyị na a ala ọnụego… ma ọ bụrụ na anyị na-aga nke ọma, na ha chọrọ nke ikike nke ọrụ ahụ, ọ ga-adị ha mkpa ịkpa nkata ahụ zụta n'aka anyị. Ma ọ bụ na ha nwere ike ịpụ, anyị na-arụ ọrụ ahụ ka anyị wee nwee ike weghachite ya maka ndị ahịa ọzọ.
Tags: gị n'ụlọngankwekọrịta ụlọ ọrụnkwekọrịta ụlọ ọrụmkparita uka ụlọ ọrụnkwekọrịtanjide
Nzọụkwụ 3 iji bido Mgbasa Ozi Ahịa Azụmaahịa